Kordhinta magaalooyinka, mawduuca 2011 - Geofumadas
Janaayo, 2011 Cartografia, Google Earth / Maps, tabo cusub
Arrinta dadku waxay noqon doonaan kuwo muuqaal ah sannadkan -iyo kuwa soo socda- Ma jiro wax badan oo la sameeyo si loo xalliyo xalalka adduunka. Sannadkan diirada saad ee Juquraafi Qaran waa dhab ahaan dadweynaha adduunka ee ku saabsan hannaanka hagaajinta bilicda 7. Daabacaadda Janaayo waa mid caadi ah.
Machadka Lincoln ee Sharciyada Territoriyaadka ayaa diyaariyey dhowr faallooyin iyo qalab cilmi baaris oo ka yimid hal daraasad oo dheeraad ah oo ku saabsan magaalooyinka 3,000 ee dhaaftay 2000 degganayaasha sannadka 100,000.
Daabacaadda aan ugu jeclahay waa dokumantiga loo yaqaan Sameynta meel loogu talagalay meeraha magaalooyinka. Warbixin xiiso leh oo falanqaynaysa horey, hadda iyo mustaqbalka kobaca magaalooyinka adduunka. Waxay soo jeedinaysaa qaab cusub oo ah sida aan ugu diyaargareyno koritaanka sanadaha soo socda.
Shaqo fiican Angel, Shlomo, oo leh Jason Parent, Daniel L. Civco, iyo Alejandro M. Blei. Waxaad ka iibsan kartaa nuqul daabacan oo loogu talagalay US $ 15 iyo soo dejinta qaabka pdf ee bilaash ah (kaliya waa inaad ku qoran tahay bogga). Sannadka 2012, daabacaadda wax la yiraahdo Ballaarinta magaalooyinka, taas oo hubaal noqon doonta soo jeedin xiiso leh oo ay ku jiraan moodooyinka Magaalooyinka Charter, taas oo i xusuusisay mabaadii'da CitiVilles ee Facebook iyo in ay khatar u tahay abuurista dhibaatooyin siyaasadeed oo cusub sababtoo ah inkastoo ay tahay soo jeedin aad u xiiso badan, dad badan ayaa u arkaa qaab cusub oo gumeysi ah.
Mawduuc kale oo ka mid ah Machadka Lincoln, had iyo jeer mawduucan waa Naqshadeynta ballaarinta magaalooyinka. Tani waa xog ururin qiimo leh oo la heli karo si loogu soo dejiyo khariidado qaab muuqaal ah, kml iyo xS waraaqo ah oo saldhig u ah dhismaha -iyo kuwa kale- dukumeentiga kor ku xusan. Waxaa sidoo kale jira macluumaad ku jira habka GIS si looga akhriyo barnaamijka GIS.
Tan waxaa loo qaabeeyey shan qaybood:
1. Qaybta koowaad, waxaa jira sawirrada jpg qaabka labo-jibbaarada si loo soo daabaco sawirada. Hal sawir waxaa ku jira xogta tirakoobka iyo jaantusyada, khariidadaha kale ee isticmaalka dhulka magaalooyinka oo lagu dhisay farsamooyin fog oo farsamo leh sawirada dayax-gacmeedka ee magaalooyinka waaweyn Magaalooyinka 120 laba xilli: Waa mid lagu dhawaqay sannadka 1990 iyo kan labaad ee 10 sano ka dib 2000.
Khariidadda sare waxay muujineysaa magaalooyinka 120, midabada ayaa ah gobollada sida daraasadda loo kala qaybiyay. Tusaale ahaan waxaan ka tagayaa labada ciyaaryahan ee Madrid.
2. Qeybta labaad Aasaasiga waxaa ka mid ah daraasad ku saabsan koritaanka taariikheed ee dadweynaha Magaalooyinka 25, falanqaynta khariidooyinka laga bilaabo 1800 dhammaadka qarnigii dhowaan la dhammeeyey. Magaalooyinka 25 waxaa loo qaybiyaa, sida khariidadan soo socda: 7 ee Maraykanka, 4 ee Yurub, 6 ee Afrika, 12 ee Aasiya iyo 1 ee Oceania.
Sawirada hoose ayaa tusaale u ah kiiska magaalo weyn ee Mexico. Dhinaca bidixda ah ee ku yaalla aagga magaalo ee 1807 illaa 2000, iyo dhinaca midigta waa xogta dadweynaha, hektarrada la daboolay, garaafka cufnaanta iyo khariidada qadiimka ah.
3. Qeybta saddexaad Waxaa ku jira jadwal ku yaal Excel oo dhan xogta taageera shaqada magaalooyinka 15 iyo 120. Exceptional, maaddaama Mitirafyada Muuqaalku noo ogolaanayo in aan aragno xogtan iyadoo loo eegayo danaheena.
4. Qaybta afaraad waxaa ku jira xogta lagu muujinayo barnaamijyada GIS. Labada qaybood ee gobollada maamulka oo leh lakabyo .shp .dbf iyo .shx si ay u arkaan barnaamij kasta, iyo sidoo kale faylasha .prj for georeferencing, .img for raster iyo .lyr loo diro si loo arko lakabka leh guryaha iyo dhismaha ee ArcGIS.
5. Qaybta shanaad Waxaa ka mid ah macluumaadka magaalooyinka 3,646 ee ku yaala warqad Excel iyo sidoo kale faylka kml ee dhammaan meelaha magaalooyinka la barto, si ay u aragto barnaamijka GIS ama Google Earth.
Marka la soo koobo, waxyaabo qiimo leh oo waxtar u leh ardayda, saraakiisha dawladda, cilmi baarayaasha, qorsheeyayaasha iyo dadka ku lug leh arimaha horumarinta dhaqaalaha.
Labada atlas iyo dukumiintuba waxay bixiyaan qaab fikradeed, waxayna u muuqataa markii ugu horeysay, xogta xeeldheer ee mustaqbalka, hadda iyo mustaqbalka ee magaalooyinka magaalooyinka adduunka oo dhan. Waxay u furan tahay aragtida caqabadda ah ee aynaan garanaynin sida loola tacaalo sanadaha soo socda.
Hadda ma arko haddii ay suurtogal tahay in laga iibsado CD ama DVD, sababtoo ah waa in download waafaqsan shakhsi ahaan.
Post Previous«Previous Juquraafiga Qaybaha
Post Next Sidee loo ogaadaa marka Google uu soo rogo sawirada meelNext »